Robit eryanayn koritaanka caalamka
waqti Post: 06-06-2018
Robit sheegay in this weyn u xoogayn doonaa meelaha ay ganacsiga DTH, iyo labada qaniimooyin, iibka net wadareed shirkadda ee ka weynaan doona € 75 million (US $ 83 million). Sida laga soo xigtay Robit, qaniimooyin waa qayb muhiim ah oo ay istiraatijiyadda kobcitaanka caalami ah, oo ay tahay looki ...Read more »
Atlas Copcoconsolidates howlo macdan Chinese
Shirkadda ayaa sheegay in tallaabadan kor u qaadayaan tayaynta iyo xoojinta shirkadda mustaqbalka. Atlas Copco saari doonaa ay xarunta ku shenyang, oo manufactures oo dhoollatus dhagax weyn oo inta badan gacanta lagu for macdanta iyo dhismaha, hawlaha loo rarayo warshadda ee Zhangjiakou. In shenyang, oo ku saabsan 225 pe ...Read more »
Shirkadda ayaa sheegay in ay sahamiyaan beddeli istiraatiiji u ogolaan doonaa in ay diiradda saaraan waxyaabaha kuwa la awood weyn koritaanka. Diir ku daray in shirkadaha iyo ganacsatada ay weli ka go'an in ay macaamiisha hadda jirta iyo taageeri doonaa kuwa maraakiibta qol iyo tiirka iyo layliga track hadda ...Read more »